Ii-smartphones ezinkulu ezili-10 ezinezikrini eziphantsi kwee-intshi ezintlanu onokuzithenga ngoku
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ii-smartphones ezinkulu ezili-10 ezinezikrini eziphantsi kwee-intshi ezintlanu onokuzithenga ngoku
Ii-smartphones ezinkulu ezili-10 ezinezikrini eziphantsi kwee-intshi ezintlanu onokuzithenga ngoku
Phantse zonke ii-smartphones zokugqibela eziphezulu ngoku zibonisa ubuncinci bee-intshi ezintlanu. Ngelixa ii & apos zilungile kuninzi lwethu, abanye abasebenzisi basakhetha ukuba nesiphatho esincinci sokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Unoko engqondweni, kungekudala sibonisile 5 zee-smartphones ze-Android ezihambelana kakuhle , njengo 4 eziphathwayo eziphathwayo kunye nebhetri esemagqabini . Ngoku lixesha le-apos yoluhlu olwandisiweyo lwee-smartphones ze-sub-5-intshi, hayi ezivela kwi-Androidland, kwaye ayisiyiyo into eneempawu zokugqibela eziphezulu okanye eziphakathi.
Zonke ii-smartphones ezibandakanyiweyo apha ngezantsi zinokuthengwa e-US (kunye nezinye iimarike). Zidwelisiwe ngokwexabiso, ukusuka kwexabiso eliphantsi ukuya kwelona libiza kakhulu.
INokia Lumia 635
Le yenye yeefowuni zokugqibela zeLumia zokuthwala uphawu lwakwaNokia (iimodeli ezintsha ziMicrosoft-branded), kwaye inokuthengwa ngexabiso elingaphantsi kwe- $ 100 kwisivumelwano. Ngokuqinisekileyo ayizokwanelisa abasebenzisi abadinga amanqaku aphezulu okanye aphakathi, kodwa, ngexabiso layo, iLumia 635 yeyona smartphone ibalaseleyo. I-apos inonxibelelwano lwe-LTE, Windows Phone 8.1, isibonakaliso se-IPS esine-intshi ezine-480 x 854 pixels, iprosesa ye-quad-core Snapdragon 400, kunye nebhetri yexesha elide ye-1830 mAh. Kukho ii-apos ezingama-512 MB ze-RAM kuphela, kodwa iiFowuni yeWindows zilungiselelwe ukuba zisebenze kakuhle ngayo. I-Lumia 635 inokuhlaziywa Windows 10, nangona ngekhe izifumane zonke izinto eziziswa yi-OS entsha.
Uphengululo lweNokia Lumia 635 .
Umlilo G LTE
Unokufumana i-Moto G LTE evuliwe kwiAmazon engaphantsi kwe- $ 200. Ngokucacileyo, esi sisizukulwana sokuqala iMoto G, enye yezemidlalo ibonisa i-4.5-intshi 720p (isizukulwana sesibini seMoto G asinakulunga kukhetho lwethu, njengoko inika isikrini esizi-intshi ezintlanu). Ngokuhlaziywa kwi-Android Lollipop kuza kungekudala, i-Moto G LTE ihlala ilukhetho olukhulu kuye nabani na ongazimiselanga ukuchitha imali eninzi kwi-smartphone entsha.
IMoto G (2013) vs. IMoto G (2014)
IMotorola Moto G LTE
IBlu Vivo Air
Ngelixa i-Blu iyinkampani yaseMelika (esekwe eMiami), ii-smartphones zayo zihlala zenziwe ngokutsha iimodeli ezenziwe ngabenzi baseTshayina. Kodwa loo nto ayisiyonto imbi. Ngapha koko, siyithande kakhulu iBlu Vivo Air (iGionee Elife S5.1), njengoko i-handset ibonelela ngeempawu ezininzi kwithegi yexabiso le- $ 199.99 (evuliwe). Kwi-5.1 mm, iVivo Air yenye yee-smartphones ezinobunzima emhlabeni. Ibaleka i-Android 4.4 KitKat, imidlalo ibonisa i-4.8-intshi ngee-pixels ezingama-720 x 1280, kwaye inikwe amandla yiprosesa ye-octa-core MediaTek processor (ayisiyiyo intshatsheli yokusebenza, kodwa ixesha elininzi yenza umsebenzi wenziwe).
Uphengululo lomoya weBlu Vivo .
BLU Vivo Umoya
IHTC One (M7)
Ngelixa ungafumana i-One (M7) off-contract ngaphantsi kwe- $ 200 e-US, kuya kufuneka uhlawule ubuncinci i-300 yeedola ukuyithenga ivuliwe. Kuzo zombini iimeko, ixabiso lihle kakhulu, njengoko i-HTC kunye ne-apos yangaphambili yeeflegi yenye yee-smartphones ezimbalwa ezinomboniso we-1080p ezincinci kune-intshi ezi-5 (ii-intshi ze-4.7, ukuba zichane).
Uphengululo lweHTC One (M7) .
I-Samsung Galaxy S5 Mini
I-Galaxy S5 Mini inikezela ngezinye zeempawu ezikhoyo kwi-Galaxy S5, kubandakanya umzimba onganyangekiyo ngamanzi (i-IP67-cerrtified), iskena seminwe, kunye nokubeka esweni ukubetha kwentliziyo. Nangona kunjalo, i-4.5-intshi ye-720p isibonisi kunye neprosesa ebuthathaka (i-Exynos 3470, okanye i-Snapdragon 400 kwezinye iimodeli) iyenza ibe sisixhobo esiphakathi esiphakathi esixabisa malunga ne-370 yeedola.
Mini ye-Samsung S5
I-Samsung Galaxy Alpha
Ukuthathelwa ingqalelo yenye yeefowuni ze-Samsung ezijongeka kakhulu, i-6.7mm-encinci ye-Galaxy Alpha yakhiwe ngaphakathi kwesakhelo sesinyithi, kwaye ilungile, ihambelana nomdlalo we-4.7-intshi ye-720p. Ikwanamandla kakhulu, ineprosesa ye-octa-core Exynos 5 5430 processor, kunye ne-2 GB ye-RAM. IAlfa iyafumaneka ivulwe malunga ne-470 yeedola.
Uphengululo lwe Samsung Galaxy Alpha .
I-Sony Xperia Z3 Icwecwe
I-Xperia Z3 Icwecwe yenye yeefowuni zeSony & apos; Ngaphandle kobungakanani bayo obuncinci, ipakisha phantse zonke izinto ze-Z3 yesiqhelo, kubandakanya iprosesa ye-Snapdragon 801, ikhamera yangemva ye-20.7 MP, kunye nomzimba onganyangekiyo ngamanzi (iqinisekiswe yi-IP68). Yintoni ngakumbi, inika ubomi bebhetri obalaseleyo. Isiphatho sesandla kunye neapos s 4.6-intshi 720p yesikrini sinokugqibelela kubasebenzisi abangathandiyo ukubonisa okukhulu. Okwangoku, unokuthenga i-Xperia Z3 Icwecwe elingavulwanga le- $ 499.
Uvavanyo lweCompact ye-Sony Xperia Z3 .
I-iPhone 5s yi-Apple & apos; iflegi yokugqibela ukubonisa i-4-intshi, 640 x 1136 ukubonisa iiphikseli, kwaye ii-apos ngoku zinonyaka onesiqingatha ubudala. Kodwa ihlala i-smartphone yeprimiyamu, nangona ixabiso layo eliphezulu (ukuqala nge-549 yeedola ivuliwe) ayifanelekanga.
Uvavanyo lwe-iPhone 5s .
I-Apple iPhone 5s
Abanye abantu bakhetha ukuba nekhibhodi ebonakalayo yeQWERTY kwi-smartphone yabo, kwaye ngokuqinisekileyo iBlackBerry iyayazi indlela yokwenza izinto eziphathwayo ngeebhodi zezitshixo zehardware. Inkampani entsha, ebizwa ngokuba yiBlackBerry Passport, ibonelela ngebhodi yezitshixo yeQWERTY, kunye nesikwere sokuboniswa kwescreen esingu-4.5-intshi nge-1440 x 1440 pixels. Lumkiswa, nangona: le ayisiyo & apos; ayiyibhodi yemveli yeBlackBerry, ke wena uya kufuna ixesha lokuyiqhela. Sukuyenza impazamo, iPasipoti ijongeka ngokungafaniyo, isiphelo esiphezulu se-smartphone, yiyo loo nto & # 39; s kutheni ibiza $ 599 ivuliwe.
Uphengululo lweBlackBerry Passport .
Yaziswa ngoSeptemba, i-iPhone 6 incede iApple ukuba ibe nekota emnandi (ubulumko bokuthengisa), kwaye ngokuqinisekileyo yeyona iPhone ibalaseleyo. Ukuboniswa kwayo kwe-4.7-intshi, i-750 x 1334 yeepikseli kuyisondeza kuninzi lweeflegi ze-Android ngokubhekisele kwilifa lesikrini, kwaye abasebenzisi be-iOS babonakala bekuxabisa kakhulu oku. Ewe kunjalo, ayinguye wonke umntu okulungeleyo ukuhlawula i-649 yeedola- okanye ngaphezulu-kwi-iPhone 6, kodwa abo babonakala bonwabile ngokuthenga kwabo.
Uvavanyo lwe-iPhone 6 .
I-Apple iPhone 6
Umhla wokukhutshwa kwe-galaxy s8
s7 emaphethelweni ngolwesihlanu omnyama 2016
Amanqaku aphezulu angama-9 aphezulu kwiMoto Moto X yoHlelo oluSulungekileyo
Kutheni iifowuni zale mihla zibiza kangaka?
Uhlaziyo lwe-Android 6.0 Marshmallow lweLG V10 eyahlukileyo yamazwe aphesheya iya bukhoma
IBlizzard yazisa nge-Hearthstone entsha: IiKnights zeTrone Frozen
I-Samsung Galaxy J7 yoPhononongo lwe-AT & T (2018)